Sida toos loogu arko soo bandhigida Muhiimka ah ee iPhone Xs cusub Sebtember 12 | Wararka IPhone
Udgoon udub dhexaad u ah haddaba, Kaliya 3 maalmood si aan uga takhalusno shakiga ku saabsan aaladaha cusub ee ragga ee Cupertino. Wax badan ayaa laga sheegay aaladahaan iyadoo ay ugu wacan tahay dhamaan wararka xanta ah ee soo ifbaxay xagaagan laakiin ugu dambeyn sugitaankii iyo xanta ayaa dhamaatay. Boodka ka dib aniga ayaa kuu sheegi doona sida loo daawado soo bandhigida Muhiimka ah ee soo bandhigida iPhones Xs cusub si toos ah soo socota Sebtember 12.
1 Sebtember 12, 19:00 pm (waqtiga Isbaanishka), Steve Jobs Tiyaatarka
2 Mac, iPhone, iPad, Android, Windows kumbiyuutarada
4 Wararka IPhone
Sebtember 12, 19:00 pm (waqtiga Isbaanishka), Steve Jobs Tiyaatarka
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan si cad u qeexno waa taariikhda iyo waqtiga, Muhiimka ah Arbacada Sebtember 12 wuxuu ka dhici doonaa tiyaatarka Steve Jobs (Apple Park) 10-ka subaxnimo (waqtiga Pacific). Spain gudaheeda waxay ahaan doontaa 19:00 (17:00 GMT), oo sidaad ogtahayba laga sii dayn doono ka dhex socda websaydhka Apple iyo barnaamijka gaarka ah ee Apple TV.
Mac, iPhone, iPad, Android, Windows kumbiyuutarada
Macno malahan barta aan ku suganahay, markasta oo aan dooneyno inaan raacno Muhiimka microsite-ka gaarka ah ee muhiimka ah (waxaad ka heli doontaa bogga guriga ee Apple) waa inaan yeelanaa shuruudo ugu yar: Safari leh macruufka 10 ama ka dib, macOS Sierra 10.12 ama ka dib, ama PC leh Windows 10 iyo Microsoft Edge. Barmaamijyada kale waxay sidoo kale awood u yeelan doonaan inay marin u helaan socodka iyagoo isticmaalaya Chrome ama Firefox (socodka wuxuu adeegsadaa MSE, H.264, iyo AAC).
Haddii, dhinaca kale, aad leedahay Apple TV, adiga Waxaan kugula talineynaa rakibida barnaamijka Dhacdooyinka Khaaska ah ee Apple (waad soo dejisan kartaa iyada oo loo marayo xiriirkan). Tani waxay u badan tahay sida ugu wanaagsan ee loo raaco dhacdadan, in kasta oo ay iska cadahay inaad maskaxda ku hayso inaad lacag bixiso si aad uhesho Apple TV.
Ugu dambeyntiina, sida dhacda mar kasta oo Tim Cook iyo shirkaddu ay qaadaan marxaladda Keynotes, dhammaan kooxda iPhone ee Actualidad waxay la socon doonaan wax kasta oo ka dhaca Tiyaatarka Steve Jobs si adag. Waxaan soo galin doonaa qoraal ay kujiraan dhammaan macluumaadka waxa ay si toos ah u soo bandhigayaan, ka dibna waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad ku soo biirto iPhone News si aad u ogaato dhammaan wararka ku saabsan iPhone Xs cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Sida loo arko toos u soo bandhigida Muhiimka ah ee iPhone Xs cusub Sebtember 12